5 sonnets naFederico García Lorca kupemberera zuva rake rekuzvarwa. | Zvazvino Zvinyorwa
5 yeJune ya1898. anonyanya kuverenga mudetembi wechiSpanish wenguva dzose, Federico Garcia Lorca. Kune mumwe munhu anonyanya kutsva kupfuura vhesi, mamwe manzwi uye nyaya kupfuura nhetembo, zvisinei, ini ndine shungu naLorca. Runako, simba, kukosha, kunzwa uye simba reshoko rake vanosvika pamatanho epamusoro epamusoro enhetembo mumutauro wakanaka wechiSpanish. Saka rimwezve gore ndinopemberera zuva rake rekuzvarwa, panguva ino na 5 yemamsoneti ake.
Zvese zvakanyorwa pamusoro paFederico García Lorca. Izvo zvisina basa uye chero izwi kana chiyeuchidzo chehupenyu hwake nebasa saka yakadzidzwa nenyanzvi dzakawanda kwazvo. Ini ndinongonyora zvinyorwa zvinyorwa pano pandinogovana kana kunakidzwa nezvandinoverenga kana kuziva. Uye kune vanyori vatove pamusoro pechero ongororo kune chimiro chako. Lorca ndomumwe wavo, imwe yacho inongoda kunzwikwa pane kuverenga. Saka ngatirege kunonoka kunakidzwa kwekuverenga ikoko zvakare.
1 5 sonnets
1.1 Gongorine sonnet
1.2 Maronda erudo
1.3 Husiku hwerudo rusina hope
1.4 Sonnet yeChichemo chinotapira
1.5 Ndiri kuda kuchema kuchema kwangu uye ndinokuudza ...
Aya ndiwo mashanu akasarudzwa kumutsa ndangariro yake: Gongorine sonnet, Maronda erudo, Husiku hwerudo rusina hope, Sonnet yeChichemo chinotapira y Ndinoda kuchema kuchema kwangu uye ndinokuudza...
Iyi njiva kubva kuTuria yandinokutumira,
nemeso anotapira uye minhenga chena,
pane laurel yeGirisi durura uye wedzera
inononoka murazvo werudo pandiri kumira.
Hunhu hwake hwakajeka, mutsipa wake wakapfava,
mune yakapetwa kaviri furo rinopisa,
nekubvunda kwechando, parera nemhute
kusavapo kwemuromo wako kuri kucherechedza.
Mhanya ruoko rwako pamusoro pechena kwayo
uye iwe uchaona kuti chii chimbo chando
yakapararira in flakes parunako rwako.
Saka moyo wangu usiku nemasikati
musungwa mutirongo rerima rudo,
anochema asina kuona kushushikana kwake.
Chiedza ichi, moto unoparadza.
Iyi yakajeka mamiriro inondikomberedza.
Uku kurwadziwa kwekufunga chete.
Kushungurudzika uku kwedenga, nyika nenguva.
Uku kuchema kweropa kunoshongedza
lyre isina kupomba izvozvi, mafuta anonwisa.
Kurema kwegungwa uku kunondirova.
Ichi chinyavada chinogara pachipfuva changu.
Ivo korona dzerudo, mubhedha wevakakuvadzwa,
uko pasina kurara, ndinorota huvepo hwako
pakati pematongo echipfuva changu chanyura.
Uye kunyangwe ini ndichitsvaga summit yehungwaru
moyo wako unondipa mupata
nehemlock uye kushuvira kwesainzi inovava.
Husiku hwerudo rusina hope
Manheru kukwira vaviri vane mwedzi wakazara,
Ndakatanga kuchema iwe ndokuseka.
Kuzvidza kwako kwanga kuri mwari, zvichemo zvangu
nguva nenjiva muketani.
Husiku pasi vaviri. Crystal yekusuwa,
iwe wakachema nekuda kwenzvimbo dzakadzika.
Kurwadziwa kwangu raive boka rematambudziko
pamwoyo wako usina simba wejecha.
Mambakwedza akatibatanidza pamubhedha,
miromo yavo pajeti ine chando
reropa risingaperi rinodurura.
Uye zuva rakauya kuburikidza nevharanda rakavharwa
nekorari yeupenyu yakavhura davi rayo
pamusoro pemwoyo wangu wakafukidzwa.
Sonnet yeChichemo chinotapira
Ndinotya kurasikirwa nechishamiso
yemufananidzo wako maziso, uye matauriro
kuti husiku hunondiisa padama
kusurukirwa kwakasimuka kwemweya wako.
Ndine urombo nekuve pamhenderekedzo iyi
trunk isina matavi; uye izvo zvandinonzwa zvakanyanya
harina ruva, pulp kana ivhu,
nehonye yekutambudzika kwangu.
Kana iwe uri pfuma yangu yakavanzwa,
kana iwe uri muchinjikwa wangu uye nekurwadziwa kwandinoita
kana ndiri imbwa yehumambo hwako,
musandirega ndirasikirwe nezvandawana
uye unoshongedza mvura yorwizi rwako
nemashizha emwaka wangu wakatarwa.
Ndiri kuda kuchema kuchema kwangu uye ndinokuudza ...
Ndinoda kuchema kuchema kwangu uye ndinokuudza
zvekuti unondida uye unondichemera
nebanga, nekutsvoda uye newe.
Ndiri kuda kuuraya chete chapupu
yekupondwa kwemaruva angu
uye tendeuka misodzi yangu uye ziya rangu
murwi wekusingaperi wegorosi rakaoma.
Dai skein isingazombopera
Ndinokuda, iwe unondida, nguva dzose iri pamoto
nezuva rakaora uye nemwedzi wakare.
Izvo zvausingandipe uye neni handikubvunze
Ichave yerufu, iyo isingasiyi
kana mumvuri wenyama inodedera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » 5 sonnets naFederico García Lorca kupemberera zuva rake rekuzvarwa.
Chirongwa chakanakisa… Zvinenge zvichibatsira kana vachizviitawo nevanyori vemazuva ano.
Sarudza nhetembo uye uratidze, kuti uzvizive uye kana zvakakodzera kutenga mabhuku avo.